प्रहरीमा सुडान र सुनभन्दा डरलाग्दो काण्ड ,पत्रकारको हत्या गर्न समिरमानसँग उच्च प्रहरी अधिकारीको सेटिङ ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > प्रहरीमा सुडान र सुनभन्दा डरलाग्दो काण्ड ,पत्रकारको हत्या गर्न समिरमानसँग उच्च प्रहरी अधिकारीको सेटिङ ?
१९ मंसिर २०७५, बुधबार १५:१४
काठमाडौं – यदि कुनै शक्तिकेन्द्रले चमत्कार देखाएन र अभियुक्तको बयानलाई प्रहरीभित्रै गुपचुप राखिएन भने केही समयमै सुडान र सुनकाण्डभन्दा पनि डरलाग्दो एउटा काण्ड पटाक्षेप हुँदैछ । बयान दिने व्यक्तिहरूको मानसिक सन्तुलन ठीक छैन, कसैको उक्साहटमा बकाइएको प्रमाणित भए अर्कै कुरा, नत्र अब प्रहरीभित्र हलचल मच्चिने घटना टर्न मुस्किल भएको अनुसन्धानरत प्रहरीहरू बताउँछन् ।
समीरमान समूहबाट गोली प्रहार गरिएपछि काठमाडौं छाडेका क्यासिनो लगानीकर्ता दावा लामा अहिले सिक्किममा छन् । उनी तरुण दल, काभ्रेका अध्यक्ष पनि हुन् । गत वर्ष फुटवलको सट्टेबाजीमा संलग्न भएको आरोपमा नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिलिगुडी, बागडोरा उड्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । पछि सफाइ पाएर रिहा भए । रिहालगत्तै बैंकक, दुबई र सिक्कितिर बस्न थालेका हुन् । काठमाडौंमा प्रहरी संरक्षित आपराधिक समूहबाट आफू खतरामा रहेको बताउने गरेका छन् । जनआस्था साप्ताहिक